Semalt Against Against Botnets - Nzira Dzokuvarwisa
Mabhokete anobata mukugadzirana nemakombiyuta akaiswa varanda uye maZombi uye anotapira nhamba yakawanda yezvigadzirwa pasi rese. Bhokneteni ndiyo inoungana makombiyuta akanganisa akabatwa uye ari kushandiswa kuita mamwe mabasa asina mhirizhonga. Vaseki havafaniri kushandisa IP yako kero kuti varwise device yako. Panzvimbo pezvo, vanongogadzira matanho makuru e zombie makombiyuta uye vanotonga maitiro akasiyana kubva munzvimbo iri kure.
Botnets yakatanga kuisa mucherechedzo muna 2001 apo vatengesi vekubhadhara mari vakatumira nheyo dzinoshungurudza paIndaneti ndokurwisa nhamba yakawanda yezvigadzirwa zvisina kudzivirirwa pasina ruzivo rwevashandisi - стул мешок цена.
Apa Artem Abgarian, nyanzvi inotungamirira Semalt , yakurukura nzira dzakasiyana dzekurwisa botnets online.
1. Vhura web-filtering services
2. Shandura ma browsers
Imwe nzira yekurwisa botnets iri kushandura web browser yako.Unofanirwa kuenzanirana pane dzimwe mhando dziri paIndaneti Explorer neFirefox. apo inorwiswa nemabhodeni.Iyo ndiyo nzira yakanakisisa iGoogle Chrome, iyo isina maitiro mamwe. Macs akachengeteka kubva kuB botets, uye Linux zvakare yakanaka kuenda nayo.
3. Dzinga zvinyorwa
Chiyero chakanyanya kunaka asi chinoshamisa ndechekudzivirira ma browsers kubva pane script zvachose, asi izvi zvingaisa damper mukubudirira kwewebsite dzako uye web-based applications. Icho hachisi chakanaka chakanaka kune makambani uye vanhu vari kushanda sevanotengesa uye vanowana zvakawanda kubva pawebsite dzavo.
4. Shandisa nzira dzekudzivirira-kudzivirira uye kuongorora-intrusion-detection
Imwe nzira inofadza uye inobatsira ndeyokushandisa dzimwe nzira dzekudzivirira-kudzivirira uye kuongorora. Somuenzaniso, kana mishoni yako ichifuratira kubva paIndaneti Relay Chat, unogona kushandisa imwe yenheyo mbiri kuti dzichengetedze pakarepo. Iyo IPS iri kuongorora mufambiro wechipikicha chako uye inoratidza kuti zvakaoma HTTP kurwisa, izvo zvinoreva kushandiswa kwezvirongwa zviviri zvinogona kukubatsira iwe nefoni yako.
5. Chengetedza zvinyorwa-zvigadzirwa zvevashandi
Zvakakosha kuchengetedza zvinyorwa zvese zvinoshandiswa nevashandi nguva dzose kuitira kuti zvirege kuitika kune vanyori vechirangarudzo paIndaneti. Dan Hubbard, mutungamiri we Websense, anoti chimwe chezvinhu zvakakosha zvemasayiti akasika-yeWeb 2.0 phenomenon.
6. Shandisa zvishandiso zvekugadzirisa
Kana mishonga yako yakatapukirwa, unofanira kushandisa zvishandiso zvekugadzirisa. Makambani akadai seSyantec anoshandisa maturusi akadaro nguva dzose sezvo achibatsira kuona uye kuchenesa marudzi ose e rootkits uye botnets. Kuita kudaro, unogona kusarudza ndiani anofanirwa kushanyira nzvimbo yako uye asingafanirwe. Iyo ichazovandudza huwandu hwehuwandu hwewebsite yako uye huchadzivirira hutachiona kubva mumudzidzi uye zvirwere zve botnet.